कुन दिन कुंभ राशिको लागि राम्रो छ? - डिसेम्बर
कुन दिन कुंभ राशिको लागि राम्रो छ?
प्रश्नहरू र उत्तम उत्तरहरू - कुम्भ शुभ दिन पात्रो डिसेम्बर
निम्न सूचीदिनहरुविशेष गरी भाग्यशाली छन् यदि तपाइँ एक होकुम्भ: जनवरी को लागि: १,,, 9th, १०, १ 15, र २०। फेब्रुअरीका लागि: २, 5th, 6th, ११, १ 16, र २ th। मार्चको लागि: तेस्रो, 6th, 7th, १०, १ 17, र th०।
हे, दर्शकहरु, तपाइँ राशि चिन्हको ख्याल गर्नुहुन्छ? यो दिन सबै क्रोध हो। मेरो मतलब, तपाईं कसैसँग तिनीहरूको राशि चिन्हको बारेमा कुरा नगरी कुरा गर्न सक्नुहुन्न। प्रत्येक राशि चिन्हको आफ्नै विशेषताहरू, मनपर्ने र colorsहरू पनि हुन्छन्, जुन आजको सार्टिकलको लागि उत्तम विषय हो हामी के सोच्छौं जुन हामीलाई लाग्छ तपाईंको मनपर्ने रंग तपाईंको राशि चक्रमा आधारित छ जसलाई पहेलो मन पर्छ जो चिन्ह बढी नीलो हुन्छ हरियो खैरो र गुलाबी प्रतीक्षामा के गर्छ दोस्रो प्यारोज कुन चिन्हको लागि हामी यी सबै र अधिक पुस्तकालयहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौं सेप्टेम्बर २rd देखि २२ अक्टुबरको हौं सुन्दर र शान्त तुला तपाईको मनपर्ने र color्गको बारेमा जान्नको लागि हामीले तपाईको व्यक्तित्वको बारेमा कुरा गर्नुपर्नेछ पहिले तुला अवस्था सामान्यतया स्थितिलाई कमजोर बनाउन सजिलो हुन्छ। , कि तपाईं आफ्नो जीवन मा आवश्यक छैन।
यसै कारण अधिकांश तुला नीलालाई शान्त र शान्त र appreciateको सराहना गर्दछ किनकि धेरै व्यक्तिहरू उदासिनतासँग सम्बन्धित हुन सक्छन् र color्ग प्रायः व्यक्तिको जीवनमा स्थिरता प्रतिनिधित्व गर्दछ उनी ज्ञानको प्रतीक हुन सक्छ तुला राशिले तपाईलाई उनीहरूको ज्ञान दिनको लागि राम्रो ज्ञान दिन्छ तपाईलाई देखाउन। तपाईको समूहमा आराम पाएको के तपाईको जन्मकुण्डलीले तपाईको बारेमा भनेको कुराको विपरित छ? टिप्पणी सेक्सन र हाम्रो पशु समुदाय बिच्छी Scorpio अक्टुबर २ to देखि नोभेम्बर २१ सम्म वृश्चिक संग कुराकानी शुरू सामान्यतया धेरै साहसी हुन्छन् त्यहाँ धेरै चीजहरु को लागी टाढा छ कि तिनीहरू लाज मान्दछन्, त्यसैले कि र red रातो पनि प्रेम र जोश प्रतीक गर्न सक्छन् एक गुणवत्ता मिनी-स्कर्पियन शो नियमित A वृश्चिक जहिले पनि प्रेमको खोजीमा हुन्छ, यो रोमान्स वा मित्रताको रूपमा होस्। यस प्रकारको शिकारले यसको छेउमा निश्चित जोखिम बोक्दछ। वृश्चिक आफैंले उफ्रँदै फेला पारे जसले रातो र makesलाई अझ राम्रो बनाउँदछ किनकि ती केवल रातो जस्तो देखिन्छ भने दिमागमा त्यस्तो खतरा हुन्छ जुन मेषको किनारमा बस्ने कसैको लागि उपयुक्त छाया हो मार्च २१ देखि अप्रिल १ th, यदि तपाईंलाई मेष y मा थाहा छ भने तपाईंले सायद याद गर्नुभयो कि तिनीहरू वास्तवमै खुला विचारधारा भएका छन् उनीहरू आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न कटिबद्ध छन् र कुनै कुराले विरलै कष्ट दिन्छ।
त्यसकारण उनीहरूले र orange्ग सुन्तला र Orange्गलाई प्राथमिकता दिन्छ सामान्यतया उत्साह, दृढ संकल्प र हर्षोल्लासलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, तर हामी यसलाई सामान्यतया ग्रीष्मकालीन सूर्यसँग बढी सुन्तला टोनसँग संबद्ध गर्दछौं यसले हामीलाई अनन्त आनन्द प्रदान गर्दछ यसले यसले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ, एक समय तपाईं तातो मौसममा आराम गर्न सक्षम हुँदैछ र अब तनावको बारेमा चिन्ता लिनु हुँदैन अगस्त २ to देखि सेप्टेम्बर २२ सम्म यो पारा-प्रभुत्वको चिन्ह स organization्गठनको तर्फबाट तयार छ यदि जीवन सिद्ध हुन सक्छ वर्जोससँग यो हुन्छ त्यसैले उनीहरूले सबै कुरा उच्चतम स्तरमा राख्छन्। प्राय: जसरी र perf पूर्णतामा हेर्दछन् यस रंगमा उनीहरूको घरहरूसँग धेरै सफा सनईहरू देख्न सक्नुहुन्छ किनकि एक कुमारीले कडा परिश्रम गर्छ र सेतो र driven्गले उनीहरूको ज्ञानलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ जुन उनीहरूलाई थाहा हुन्छ सँधै धेरै अन्य कुन कुराको हुँदैनन् भनेर। तिनीहरू धनु नोभेम्बर २२ देखि डिसेम्बर २१ सम्म धनुमा सफल छन्। धनु i तपाईलाई भेट्ने बढी चाखलाग्दो मानिस मध्ये एक हो, हामीलाई उनीहरु जस्ता धेरै व्यक्ति चाहिन्छ। तपाईको दैनिक जीवनले उनीहरूको व्यक्तित्वले एउटा कोठा उज्यालो पार्दछ, जुन विडंबनापूर्ण छ कि किन कि मनपर्दो र purp्गको बैजनीको रंगलाई केहि प्रतीकको रूपमा लिन सक्दछ जबकि धनु एक रमाइलो हावाको साथ ऊर्जावान हुन्छन् जुन प्रायः जीवनको अर्थको बारेमा चिन्तित भइरहेको हुन्छ मेरो यस चट्टानको उद्देश्य के यो सबै यहाँ आउँछ बैजनी रहस्य अज्ञात दिव्य प्रश्न प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ हाम्रो स्थान के मन्त्रको छ कि महान् व्यवस्था मा छ डिसेम्बर २२ देखि जनवरी १ this, यो शनि शासित राशि चक्र हस्ताक्षर धेरै कठिन काम गर्छ तपाईं मार्फत सफलता हासिल गर्न। आत्म-अनुशासन र नियन्त्रण मकर तपाईंको आफ्नै कामको साथ व्याकुल छ कि तपाईं अक्सर धेरै मेहनत गरेको किन आरोप लाग्छ तपाईं किन कालो कालो काल्पनिक फरक अर्थ छ जबकि केहि यसलाई मृत्यु र दुष्ट संबद्ध प्रयोग गर्दा, अरूले यसलाई Mac Ht सख्त gth को प्रतीकको रूपमा देख्दछन्। र अधिकार मकर राशि कालाको लागि यसको शक्ति प्रदर्शन को लागी आकर्षित हुन्छ र कुम्भ कुमारी हासिल गर्न को लागी जनवरी २० देखि फेब्रुअरी १ ​​Aqu कुंभ राशि सामान्यतया व्यक्ति हो सबैभन्दा उन्नत दृश्यहरू भएको कोठा, सब भन्दा उन्नत नहुन सक्छ, तर उनीहरूले निश्चित रूपमा उनीहरूलाई आवाज दिन्छन् १० मिनेट कोठामा नभई उनीहरूले सामाजिक मुद्दाहरू र ग्रह बचत गर्ने तरिकाहरू र के के बारेमा कुरा गर्न सुरू गर्छन् भनेर। एक्वैरियसको रंग तपाईले पिरोज़ालाई सोध्नुहुन्छ वास्तवमा ओहो हो पिरोज़ामा अकबेरियसको मामिलामा सामान्यतया बुद्धिमता र संरक्षण प्रतिनिधित्व गर्दछ यसले हेपेथ्याटलाई विचारलाई जोड दिन्छ कि हामी यथार्थवादी छौं भने ती चीजहरू राम्रोसँग बाहिर जान सक्दछन्, जबकि एक कुम्भ हुन सक्दैन। उनका सबै विचारहरूसँग सही हुनुहोस्, तिनीहरू पक्कै पनि आशावादी छन् कि किन कि मानिसहरू लिओ जुलाई २ 23 देखि मार्च २२ अगस्तको आसपासमा रहनुको आनन्द लिन्छ यो राशि चक्रको लागि अर्को आशावादी संकेत हो सूर्य शासित लियो प्रायः सकारात्मक रहन्छ परिस्थिति त्यहाँ कुनै आशा छैन जस्तो पनि भए पनि, लियो पनि यी गुणहरु संग मान्छे को मनोरन्जन गर्न को लागी बाँच्दछ र अधिक के छ त्यसैले उनीहरु मान्छे आकर्षित गर्दछ पहेलो तिनीहरूको रंग पहेलो usuall छ y खुशीको सकारात्मकता र उर्जाको लागि खडा हुन्छ कुन लि way्क वर्णन गर्न तिनीहरू उत्तम तरीकाले स्वाभाविक हुन्छन् र राम्रो समयको खोजीमा पहेलोले पनि तपाईंलाई माया गर्ने चीजहरूको लागि तपाईंको उत्कटतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ हामी अघि बढ्नु अघि। के तपाइँ एक साथी खोज्न को लागी प्रयास गरिरहनु भएको छ जसले तपाइँको व्यक्तित्व विशेषता साझा गर्दछ? हाम्रो लेख हेर्नुहोस् जहाँ उनीहरू तपाईंको राशीक्र साइनको आधारमा तपाईंको उत्तम संयोजनको बारेमा छलफल गर्छन् अब हाम्रो मनपर्दो राशिफल रंग मीन फेब्रुअरी १ ​​to फेब्रुअरीमा २० औं मार्चसम्म नेप्चुन र जुपिटर फिशर्स द्वारा साझेदारी गरिएको, अरूलाई समानुभूतिका लागि चिनिन्छ, सम्पूर्ण अपरिचितको साथ समान व्यवहार गर्नुहोस्। उनीहरूको साथीहरूको लागि न्यानोपन उनीहरूको कोमल प्रकृतिले गुलाबी रंगको प्रतिनिधित्व गर्दछ सामान्यतया मैत्री र मित्रतालाई जोड दिन्छ, जबकि दुवै तत्वहरू मीनमा प्रतिबिम्बित हुन्छन् पिन्सेको साथ साझा गर्ने सबैभन्दा उत्तम गुण एक्सेसीबिलिटी हो यो करुणाका कारण अत्यन्त प्रतिक्रियाशील हुन्छ। तपाईलाई वृषभ अप्रिल २० देखि २० तारिख लाग्ने मुद्दाहरुका साथ व्यक्ति आउन सहज छ भनेर देखाउनुहोस्। हे दर्शकहरु! के तपाइँ राशिफलमा रूचि राख्नुहुन्छ? यी दिनहरू सबै क्रोधको मतलब तपाई कसैसँग उनीहरूको राशि चिन्हको बारेमा कुरा नगरी कुरा गर्न सक्नुहुन्न।
प्रत्येक राशिको चिन्हको आफ्नै विशेषताहरू हुन्छन्। मनपर्ने रंगहरू पनि। वास्तवमा आजको लेखको लागि त्यो उत्तम विषय हो।
हामी के कुरा गर्छौं भन्ने कुरा गर्छौं भन्ने लाग्छ हामी मनपर्ने रंग तपाईंको राशि साइन मा आधारित छ। को पहेलो मन पर्छ? कुन चिन्ह बढी नीलो छ? हरियो, खैरो र गुलाबी रंगको अर्थ के हो? एक सेकेन्ड पर्सा? कुन चिन्ह यो मा छ? हामी ती सबैको बारेमा कुरा गर्दैछौं कि अझ बढी ...
तुला (सेप्टेम्बर २ to देखि अक्टुबर २२) आह सुन्दर र शान्त तुला। तिनीहरूको मनपर्ने र color पत्ता लगाउनको लागि, हामीले पहिले उनीहरूको व्यक्तित्वको बारेमा कुरा गर्न आवश्यक छ। तुला सामान्यतया धेरै ढीला हुन्छन्, तिनीहरूले प्रायः व्यक्ति र वातावरणहरू रोज्दछन् जो शान्त रहन्छन्।
यदि दुई व्यक्ति झगडा गर्दैछन् भने तुला राशिले स्थिति बेवास्ता गर्न सक्दो कोशिश गर्नेछ। तपाईलाई आफ्नो जीवनमा त्यस्तो तनावको आवश्यकता पर्दैन। यसैले अधिकांश तुला नीलाको कदर गर्दछ।
निलो एक शान्त र कोमल र depression्ग डिप्रेशन हो, र color अक्सर व्यक्तिको जीवनमा स्थिरता प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसले बुद्धिलाई पनि प्रतीकको रूपमा लिन सक्दछ। तराजूले तपाईको ज्ञान राम्रो देखाउँदछ।
के तपाईं आफ्नो समूहमा आराम पाएको हुनुहुन्छ? के यसले तपाईंको कुंडलीले तपाईंको बारेमा भनेको कुराको विरोधाभास गर्छ? टिप्पणी खण्ड हिट र हाम्रो पशु समुदाय संग कुराकानी शुरू ... वृश्चिक (अक्टुबर २rd देखि नोभेम्बर २१) वृश्चिक सामान्यतया एकदम बहादुर हुन्छन्। त्यहाँ धेरै चीजहरू छैनन् जुन तिनीहरू लाज मान्दछन्। यो ठीक र red्गले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ, यो प्रेम र उत्कट प्रतीक पनि हुन सक्छ, धेरै वृश्चिकहरूले नियमित रूपमा देखाउँछन् भन्ने गुण।
वृश्चिक जहिले पनि प्रेमको खोजीमा हुन्छ, रोमान्स वा मैत्रीको रूपमा होस्। यस प्रकारको सतावटले उनीहरूको केही जोखिम उठाउँदछ। वृश्चिक ले तिनीहरूलाई आफैंमा उफ्रँदै गरेको फेला पार्छ, जसले उनीहरूको लागि उत्कृष्ट र red पनि रातो बनाउँदछ।
केवल रातोको उपस्थिति खतराको सम्झना गराउँछ। यो किनारामा बस्ने कसैको लागि उत्तम छाया हो। मेष (मार्च २१ - अप्रिल १ th) मेष, तपाईंले सम्भवतः याद गर्नुभयो उहाँ धेरै मिलनसार हुनुहुन्छ।
ऊ आफूले चाहेको ठाउँमा पुग्न कटिबद्ध छ र विरलै उसलाई केहि पनि दु: ख दिन दिन्छ। यसको कारणले, मेषले रंग सुन्तला मन पराउँछन्। सुन्तलाले प्राय: उत्साह, दृढ संकल्प, र खुशी प्रतिनिधित्व गर्दछ।
तर यो भन्दा पनि यो अझ धेरै छ। हामी प्राय: ग्रीष्म sunतुको सुन्तलाको साथ सुन्तलाको शेडहरू सम्बन्धित गर्छौं। यसले हामीलाई अकथनीय आनन्द दिन्छ।
एक तरीकाले, यसले मेषको दिशामा काम गरिरहेको कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ, यो समय जुन न्यानो मौसममा बस्दछ, आराम गर्नुहोस् र तपाईंले तनावको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। कन्या (अगस्त २ August देखि सेप्टेम्बर २२) यो बुध-शासित चिन्ह सँधै संगठनको दिशामा हुन्छ। यदि जीवन उत्तम हुन सक्छ, कुमारीहरु हुनेछ।
तिनीहरू सबैलाई उच्च स्तरमा राख्छन्। सेतो प्राय: पूर्णताको रंगको रूपमा देखिन्छ। धेरै राम्रा फ्रेकहरूले आफ्नो घर यस रंगमा चित्रित गरेका छन्।
किनभने एक कन्या कडा परिश्रम गर्दछ र सफलताको लागि प्रेरित छ, सेतो रंगले उनीहरूको ज्ञान प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। तिनीहरू चीजहरू बारे सजग छन् जुन अरू धेरै होइनन् र त्यस्तै उनीहरू सफल हुन्छन्। यो जारी छ ....
धनु (नोभेम्बर २२ देखि डिसेम्बर २१ सम्म) धनु तपाईलाई भेट्ने बढी चाखलाग्दो व्यक्ति मध्ये एक हो। हामीलाई दैनिक जीवनमा उनीहरू जस्तै धेरै व्यक्तिहरू आवश्यक छ। तिनीहरूको व्यक्तित्व एक कोठा बत्ती, जो काफी विडंबना को लागी जब उनको मनपर्ने रंग बैजनी हो कि विचार को लागी।
बैजनीले धेरै प्रतीक दिन सक्छ। जबकि धनु ऊर्जावान र हँसीको ठूलो भावना राख्छन्, तिनीहरू प्रायः जीवनको अर्थको बारेमा सोच्दछन्। यस चट्टानमा मेरो उद्देश्य के हो? यसको अर्थ के हो? यो जहाँ बैजनी आउँदछ।
यो एक रहस्य हुन सक्छ। अज्ञात हाम्रो स्थान के छ भनेर ईश्वरीय प्रश्न संसारको रीतिरिवाजमा छ।
मकर (डिसेम्बर २२ र जनवरी १ th तारिख) यस शनि शासित राशि चक्रमा कडा परिश्रम गर्दछ। तपाईं आत्म-अनुशासन र नियन्त्रण अभ्यास गरेर सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ। मकर आफ्नो कामसँग यति व्याकुल छ कि तिनीहरू प्राय: धेरै कडा परिश्रम गरेको आरोप लगाइन्छ।
किन उनीहरूलाई कालो मन पर्छ। कालोको बिभिन्न अर्थहरू छन्। केहीले यसलाई मृत्यु र दुष्टसँग सम्बद्ध गर्दछन्, अरूले भन्दा अरूले यसलाई शक्ति, शक्ति र अधिकारको प्रतीकको रूपमा हेर्दछन्।
मकर जातिको शक्ति का प्रतिनिधित्व र केहि प्राप्त गर्न को क्षमता को लागी कालो मा खींचिन्छ। कुंभ (जनवरी २० देखि फेब्रुअरी १)) कुम्भ प्रायः कोठामा भएको व्यक्ति हो जसमा सब भन्दा उन्नत विचारहरू हुन्छन्, हुनसक्छ सब भन्दा उन्नत होइन, तर तिनीहरू निश्चित रूपमा अरूहरू भन्दा बढी बोल्छन्। तिनीहरू कोठामा पनि छैनन् दस मिनेट अघि तिनीहरूले सामाजिक मुद्दाहरू र ग्रह बचत गर्ने तरिकाहरू बारेमा कुरा गर्न सुरु गर्छन्! प्रतीक्षा गर्नुहोस्, साँच्चै? ओ हो
फ़िरोज़ामा निकै भारी प्रतीकात्मकता छ। फ़िरोज़ाज सामान्यतया बुद्धि र सुरक्षा प्रतिनिधित्व गर्दछ। कुम्भबाट गिरावटमा यसले आशालाई जोड दिन्छ।
हामी यथार्थपरक छौं भने चीजहरू राम्रोसँग फेर्न सकिन्छ भन्ने धारणा। जबकि एक कुम्भ उनीहरूको सबै विचारको साथ सही नहुन सक्छ, तिनीहरू पक्कै पनि अधिक आशावादी छन्। यही कारणले मानिसहरू उनीहरूको वरिपरि हुन चाहन्छन्।
सिंह (जुलाई २rd देखि अगस्ट २२) यो राशिको अर्को उत्साहजनक चिन्ह हो। सूर्य शासित लियो सामान्यतया एक हो जो एक स्थिति मा सकारात्मक रहन्छ। जे भए पनि त्यहाँ कुनै आशा छैन।
लियो पनि मान्छे को मनोरन्जन को लागी बस्छ। यी गुणहरू र अधिक मानिसहरूलाई आकर्षित गर्दछ। त्यसैले पहेँलो तिनीहरूको रंग हो।
पहेंलो रंगले सामान्यतया खुशी, सकारात्मकता र उर्जा प्रतिनिधित्व गर्दछ। लियो वर्णन गर्न के राम्रो तरिका। तिनीहरू साँच्चिकै सहज छन् र राम्रो समयको खोजीमा छन्।
पहेंलो रंगले पनि उनीहरूलाई आफ्नो मनपर्ने चीजको लागि प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। हामी अगाडी बढ्न अघि, एक प्रयास दिनुहोस् एक व्यक्तिको विशेषता पत्ता लगाउने को मिलान फेला पार्न को लागी? हाम्रो राशीमा आधारित तपाइँको उत्तम मेलको बारेमा छलफल गर्ने हाम्रो लेख हेर्नुहोस्। अब हाम्रो सबैभन्दा लोकप्रिय राशि र colors्गहरूको सूचीमा फर्कनुहोस्।
मीन (फेब्रुअरी १ ​​to देखि मार्च २०) मीन दुबै नेपच्यून हो र बृहस्पति अरूलाई आफ्नो करुणाका लागि चिनिन्छन्। NS ती साथीहरु लाई लागी उष्णता संग पूर्ण अपरिचितहरु संग व्यवहार। तिनीहरूको कोमल प्रकृति गुलाबीले उत्तम प्रतिनिधित्व गर्दछ।
रंग गुलाबी सामान्यतया मैत्री र दया जोड दिन्छ। जबकि दुबै तत्वहरू मीनमा प्रतिबिम्बित हुन्छन्, गुलाबीसँग साझेदारी गर्ने सबैभन्दा उत्तम गुणस्तर भनेको पहुँच हो। माछा धेरै सुलभ छन्।
उनीहरूले देखाउने अनुकम्पाको कारण, मानिसहरू उनीहरूसँग समस्यामा आउन मन पराउँछन्। तिनीहरू उनीहरूको वरिपरि शान्त महसुस गर्छन्। वृषभ (अप्रिल २० देखि मे २० सम्म) यदि त्यहाँ एउटा कुरा छ भने तपाईंले वृषलाई दोष दिन सक्नुहुन्न यो अविश्वसनीय हो।
यो रगत मा छैन। वृषभले आफूलाई काममा समर्पित गर्दछ। कहिलेकाँही एकै समयमा धेरै।
यी कार्यहरू एक घण्टा वा धेरै वर्ष लिन सक्दछ। जे भए पनि, तिनीहरूले यसलाई समाप्त गर्नेछन्। यसैले तिनीहरू रंग हरियोको कदर गर्दछन्।
हामी मध्ये धेरै जसो हामी 'हरियो' सुन्दा पैसाको बारेमा सोच्दछौं। ठिक छ, त्यहाँ यस भन्दा अलि बढी छ। हरियो प्राय: विकास प्रतिनिधित्व गर्दछ।
वृषभ जीवनमा सँधै प्रगति गर्दछ र आफुको बारेमा बारम्बार नयाँ कुरा सिक्छ। यदि उनीहरूसँग समस्या छ भने तिनीहरू नयाँ कौशल वा क्षमताको साथ उभिनेछन्। अर्को शब्दमा, तिनीहरू सजिलै अनुकूलन गर्दछ।
मिथुन (मे २१ देखि जून २०) एक मिथुन सधैं आफैसँग युद्धमा हुन्छन्। मेरो मतलब, तिनीहरू साँच्चिकै सुन्दर मानिसहरू हुन्। तपाईं चलाख र भावुक हुनुहुन्छ।
एकै समयमा, तथापि, तिनीहरू पनि गहिरा पक्ष हुन सक्छ। मेरो मतलब, तिनीहरू प्रायः अधीर वा निराश हुन्छन्। यसले मानिसहरूलाई तिनीहरूको असंगत कल गराउँछ जसको कारण उनीहरूको मनपर्ने रंग खैरो छ।
थोरै बोरिंग लाग्यो, हैन र? एक क्षणको लागि मेरो कुरा सुन्नुहोस्। किनकि खरानी र कालो र सेतो बीचको रंग हो, यसले अक्सर सन्तुलनको प्रतीकको रूपमा काम गर्दछ। यो मिथुनले आफ्नो जीवनमा खोज्ने कुरा हो।
एक स्थान जहाँ उनी उनीहरुको जुत्तामा सहज हुन सक्छन् र धेरै टाढा पनि नहुन सक्छन्। क्यान्सर (जुन २१ देखि जुलाई २२) क्यान्सरले अगाडि बढाउन मनपराउँदछ। तिनीहरू बेला बेला धेरै कठोर व्यवहार गर्दछन् केवल अरूबाट आफ्नो संवेदनशील पक्ष बचाउन।
वास्तविकतामा, क्यान्सरले उनीहरूको वरिपरिको बारेमा धेरै ख्याल राख्छ। तिनीहरू वास्तवमै परिवार र साथीहरूप्रति वफादार छन्। त्यसकारण उनीहरूको मनपर्ने र brow ब्राउज एन हो।
जब व्यक्तिहरू खैरोको सोच्दछन् उनीहरू दु: खी र एक्लो हुन सक्छन्। यो पक्कै पनि त्यस्तो रंग होईन जुन दिमागमा आउँदछ जब हामी खुशीका विचारहरू गर्छौं। क्यान्सरका लागि, खैरोले उनीहरूको विश्वसनीयता प्रतिनिधित्व गर्दछ।
व्यक्तिहरू धेरै अलग चीजको लागि तिनीहरूमा भर पर्दछन्। त्यो किनभने तिनीहरू आवश्यक समयमा भरपर्दो छन्। राशिचक्र चिन्ह निश्चित रूपमा यी दिनहरूमा एक लोकप्रिय विषय हो।
के तपाई अझ बढि जान्न चाहानुहुन्छ? ठीक छ, मसँग जाँच गर्न केहि अन्य चीजहरू छन्। के तपाईं अँध्यारो छेउमा जान चाहानुहुन्छ? प्रत्येक राशि चिन्हको अन्धकार पक्षमा हाम्रो लेख हेर्नुहोस्। त्यसोभए अन्धकार छ, कसरी खतरनाक राशि संकेतहरूको बारेमा? अब एउटामा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंको राशि चिन्हको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
तपाई कुन राशि चिन्ह हुनुहुन्छ? के हामी तपाईंको मनपर्ने रंगको साथ ठीक छौं? हामीलाई तलका टिप्पणीहरूमा थाहा दिनुहोस्, र हाम्रो च्यानलको सदस्यता लिन नबिर्सनुहोस्।
कुंभ शुभ दिन भनेको के हो?
राशिफल १ December डिसेम्बर: यो एक होशुभ दिनको लागीकुम्भ, अन्य राशि चिन्हहरूको बारेमा जान्नुहोस्।१। २०२०।
भोलि कुंभ राशिको लागि शुभ दिन रहनेछ?
भोली हुनेछएक धेरै हुनकुंभ राशि को लागि शुभ दिनर यसको पार्टनर। जहाँसम्म, केहि खराब तत्वहरूले सम्बन्ध बिगार्न कोशिश गर्न सक्दछन्कुंभो भोली। तर, दुई बीचको सम्बन्ध पनि छकडाबिग्रनु
यो तपाईको भाग्यशाली नम्बरहरूको लेख हो, म वास्तवमा तपाईलाई यस महिनाको लागि केही भाग्यशाली नम्बरहरू दिन प्रेरणा भएको थियो।
म सुझाव दिन्छु कि तपाईले यसलाई प्रयोग गर्नुहोला र अभ्यास गर्नुहोस् तपाईको भाग्यशाली संख्याहरू धेरै चोटि लगानी वा शर्त लगाएर। थाईल्याण्डको लटरीमा मैले मेरो भाग्यशाली नम्बरहरू प्रयोग गरें र मैले वास्तवमै तीन नम्बरहरू जितें, तीन पहिलो नम्बरहरू र छैटौं नम्बरको चिट्ठा निश्चित टिकटमा थपे, तर टिकट जितिए पनि मलाई जित्न केही समय लाग्यो। मैले ticket १ को टिकट किनें र मैले तीन वा चार महिनामा धेरै टिकट किनें।
त्यहाँको चिट्ठा एक महिनामा दुई पटक कोरिएको छ तपाइँ कुन राज्यमा हुनुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दै, यदि तपाइँलाई खेलने अनुमति दिइयो, यदि तपाइँलाई खेल्न अनुमति दिइएन भने, कस्तो किसिमको चिठ्ठा, तपाइँ कुन बलहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, कस्तो किसिमको वस्तुहरू तपाइँ। पुन: व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईं आफ्नो भाग्यशाली नम्बरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तर तपाईंले आफ्नो अन्तर्ज्ञान अनुसरण गर्नुपर्छ यो पूर्ण रूपमा रमाईलोको लागि हो। त्यसोभए मेरो भागमा तपाईको भाग्यशाली नम्बरहरू दिन कुनै जिम्मेवारी छैन। तपाईंले तिनीहरूलाई जसरी तपाईं प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
सर्वप्रथम, म तपाईंलाई सल्लाह दिन चाहन्छु कि तपाईको जन्म संख्याको लागि जन्म नम्बरको क्यालकुलेटरमा तपाईको नाम खोज्नको लागि जुन तपाईंलाई जन्मँदा दिइएको थियो त्यो नाम फरक पर्दैन यदि तपाईले आफ्नो नाम परिवर्तन गर्नुभएको छ भने तपाईले यो नाम तपाईको नाम प्रयोग गरिरहनु भएको छैन कि तपाई तपाईको जन्म भएको बखत जन्म तपाईको आत्मामा छाप छ र तपाई न्यूमरोलोजी नेम क्याल्कुलेटरमा हेर्दै हुनुहुन्छ म कसरी तल एउटा लिंक थप्दै छु कि कसरी गर्न सकिन्छ एक १ बी २ छ तपाईले सबै नम्बरहरू थप्नुभयो र तिनीहरूलाई साझा संख्यामा ल्याउनुहोस्। १ र between बीचमा यदि तपाईंले २२ वा ११ पाउनुभयो भने यो नम्बर कम नगर्नुहोस् किनकि यो मास्टर नम्बर हो, यदि कुनै नम्बर तपाईंको नाम वा जन्म मितिमा हराइरहेको छ भने? ती संख्याहरूमा तपाईंको पूर्ण जन्म मिति शर्त नराख्नुहोस्। मान्नुहोस् कि तपाईले4र miss याद गर्‍यो। म घरहरूमा नबसीएको सिफारिश गर्दछु जुन मैले यी नम्बरहरूमा थपेको छु, वा शर्त वा ती नम्बरहरू प्रयोग गर्न सक्छ किनकि यसले ती नम्बरहरूसहित कर्म सक्रिय गर्न सक्छ, र यदि त्यसो हो भने यी नम्बरहरू भएमा सञ्चार राम्रो छैन। प्रयोग गरीएको छ, तब यसले केहि ल्याउन सक्छ।
यो उत्तम छैन, त्यसैले आफ्नो भाग्यमान नम्बरहरू तपाईंको जन्म मितिसँग यस्तो गर्नुहोस्। तपाईको पहिलो नाम र जन्म मितिमा के नम्बरहरू छन्। त्यसोभए तपाईको जन्म मिति थप्नुहोस्, एक र between बीचको नम्बरमा ल्याउनुहोस्, वा यो ११ वा २२ हुन सक्दछ, यो तपाईंको जन्म हो तपाईंको भाग्य पथ नम्बर, तपाईं आफ्नो भाग्य पथ नम्बरलाई दिनको संख्यामा थप्नुहुन्छ जन्मिएको हो, त्यसैले यदि तपाईं एक निश्चित महिनाको दोस्रो मा जन्मनुभएको थियो भने तपाईं आफ्नो भाग्य पथ संख्यामा २ थप्नुहुनेछ जुन भाग्यशाली संख्यामध्ये एक हो जुन तपाईं अर्को भाग्यशाली नम्बर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईं आफ्नो जन्ममा संख्या मध्ये एउटा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ नाम? वा तपाईको जन्म मिति वा दिन तपाई अर्को भाग्यशाली संख्या प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईको आरोहीको डिग्री हो, यदि त्यो डिग्री सहि छ, त्यसैले यदि तपाई १ degrees डिग्री क्यान्सर वा त्यस्तै १ degrees डिग्री क्यान्सर आरोहणमा जन्म भएको थियो भने, तब १ degrees डिग्री वा १ be हुनेछ साथै ज्योतिष मार्फत तपाईको भाग्यशाली नम्बर पनि त्यसैले म तपाईंलाई संख्याशास्त्र ज्योतिष मार्फत भाग्यशाली नम्बरहरू दिदैछु र म एक चक्कर लगाउनेछु र कार्डहरूको साथ छनौट गर्नेछु र प्रत्येक व्यक्तिगत राशि चिन्हको लागि देख्छु जुन कार्डहरूमा तपाई कुन नम्बर देख्नुहुन्छ? यो मे अमावस्याको लागि अगाडि बढ्ने हो किनकि यूरेनस वृष राशिमा छ।
यो तपाइँको वित्तीय स्थिति र वित्त मा एक ब्राण्ड नयाँ अध्याय खोल्न सक्छ, पुनरुद्धार र सबैको लागि वित्त पुनर्संरचना, साथ साथै ग्रह वित्त। यसले आंशिक रूपमा तपाईलाई अबदेखि यस बर्षको अन्त सम्म असर गर्न सक्छ ताकि हामी यसलाई फेरि गर्नुपर्दैन। त्यसोभए आफ्नो भाग्यशाली संख्याहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई फेरि यस लेखको माध्यमबाट काम गर्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् तपाईंको भाग्यशाली संख्याहरू के हो र होसियारीपूर्वक जानुहोस् मैले भनेका कुराहरूमा किनकि तपाईं आफ्नो भाग्यशाली संख्या गणना गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसो भए तपाईको भाग्य मार्ग नम्बर तपाईको जन्मदिन नम्बरमा थपिने छ। यदि तपाईं ११ वा दोस्रो वा सातौंमा जन्मनुभयो भने, यो भाग्यशाली संख्या हो। अर्को भाग्यशाली नम्बर तपाईंको नाम थपिएको छ र संख्यामा कम गरिएको छ? म वास्तवमा ११ ११ मा जन्मेको हुँ र मेरो जन्ममा मेरो नाम ११ छ त्यसैले म एक डबल ११ हुँ fate भाग्य रोगको डोलिबल ११ एक प्राकृतिक च्यानल हो, त्यसैले म तपाईंको लागि सन्देशहरू च्यानल गर्दछु।
त्यसोभए, तपाइँलाई थाहा छ, यो रकेट विज्ञान होइन र तपाइँ तपाइँको संख्याहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँको शक्ति र कमजोरीहरू के हो पत्ता लगाउन। आशा छ कि तपाईंले ठ्याक्कै बुझ्नु भएको छ मैले के भनिरहेछु, र यदि तपाईं लेखमा पोष्ट गर्नुहुन्न भने, त्यसो भए तपाईंको पहिलो नाम सबै छन्। तपाईंको पहिलो नामबाट कुनै हराएको संख्याले तपाईंको जन्म मितिमा शर्त लगाउँदैन तपाईंको भाग्य पथ नम्बर तपाईंको भाग्य मार्ग नम्बर पनि तपाईंको जन्मदिन नम्बरमा थपियो एक भाग्यशाली संख्या हुन सक्छ, ठीक छ, त्यसो भए तपाईंको भाग्य मार्ग is र तपाईंको जन्म हो भने नम्बर २ हो त्यसैले यदि तपाईं ११ तारिखमा जन्मनुभयो र तपाईंको भाग्यशाली संख्या मेरो जस्तै be हुनेछ।
भाग्य संख्या,, मेरो बढ्दो साइन डिग्री is हो र मैले9मा पहिले नै धेरै शर्त लगाएको छु र थाईल्याण्डमा नौ कम्पनको माध्यमबाट वास्तवमा मैले यो टिकट जितेको छु। त्यसोभए तपाइँ के गर्न चाहानुहुन्छ के बारे सोच्नुहोस्, तपाइँ के गर्न चाहनुहुन्छ? के तपाइँसँग तपाइँको नम्बरहरू छन्? त्यसोभए यदि तपाइँसँग कुनै टिकट किन्न वा लटरीको लागि केहि नम्बरहरू छान्ने वा तपाइँको नम्बरहरू कहाँ प्रयोग गर्ने भनेर केहि निर्दिष्ट गर्ने उपाय छ? त्यसोभए यो गर्नुहोस्। मँ हैन, तपाइँलाई थाहा छ कि तपाइँ जुवालाई प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ तर यदि तपाइँसँग एउटा संकेत छ र यदि तपाइँसँग पैसा बनाउन कम्ति राम्रो ट्रान्जिटहरू छन् वा संख्याका माध्यमबाट केहि फाइदाजनक हुन्छ भने तपाइँ अगाडि बढ्नुहुन्छ तसर्थ कुनै थप विज्ञापन बिना, म केवल एक गोल गर्दछु र म यहाँ अर्डरबाट बाहिर छुँ त्यसैले मैले मेषलाई मीनको लागि गर्नु पर्छ र म प्रत्येक साइनको लागि कुन रेखाचित्र तान्दै छु भनेर रोज्ने छु, त्यसैले म मेषको साथ सुरु गर्छु र पक्कै, ठीक? त्यसो भए मँ केवल तपाईंको लागि नम्बरहरू प्राप्त गर्नेछु, ठीक छ, त्यसैले १ 18 छ हामीसँग १ries र एरिज १ for को लागि हामीसँग १ 14 र केही नम्बरहरू अमेरिकामा छन् र केही ठूला लटरीहरूमध्ये like 44 वा 46 46 नम्बरहरू मनपर्दछ त्यसैले तपाईं हुनसक्छ पत्ता लगाउनु पर्छ।
त्यसोभए यदि तपाई ठूलो स into्ख्यामा जानुहुन्छ भने, यदि तपाईसँग आफ्नो जन्म मितिमा राम्रो नम्बरहरू छन् भने त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसो भए यदि तपाईंसँग चार र धेरै चौका छ र आफ्नो जन्मदिन वा आफ्नो नम्बरहरू छनौट गर्नुहोस् तपाईंको नामको लागि तपाईंले 42२ बनाउन सक्नुहुन्छ। ठीक छ। , त्यसैले सात एकल व्यक्ति ११ कि डबल र अर्को हुन सक्छ कि अर्को हुन सक्छ कि म पनि मेष राशि ठीक छ को लागी 33 3333 get प्राप्त गर्न सक्छ, किनकि हामी तीन, जो तीन हो र मलाई लाग्छ कि यो एक डबल छ, त्यसैले हामी यसलाई as मा गर्छौं। त्यसैले वृषभ।
मैले भर्खर यसैलाई समातें। त्यसोभए हामी यस वृषभ २ 27 देखि 82२ मा जाँदैछौं, त्यसैले २ + २ २२ हो, त्यसो भए तपाईंले पनि वृष राशिको लागि २२ र do गर्न सक्नुहुन्छ। म पनि लाग्छ कि वृषभको लागि7साथ साथै O ओकेका लागि and र २ पनि जान सक्छ।
अब हामी मिथुन मिथुन58 10 १० १० मा ट्युन गर्छौं ताकि एक रात पनि २ ten र सात हुन सक्छ। मँ भनिरहेछु कि ऊ फेरि एक चमत्कार भयो, त्यसैले अठासी। तपाइँ y 36636336 get पाउनको लागि तपाईं eight० अस्सी si पाँच पैठ्ठी छ र छ छ छ तीन छ जान सक्नुहुनेछ, ठीक छ, त्यसैले त्यस्तो प्रकारको एक रिंगटोन छ।
मिथुन ठीक छ, अर्को साइन क्यान्सर १ / १ म पनि एक भन्छु, ताकि यो १११ हुन सक्दछ, यो पनि ११ हुन सक्छ वा जब हामीसँग यहाँ डबल ११ छ, क्यान्सर, तिनीहरू क्यान्सरको लागि चार ओके हुन सक्छ वा यो पनि हुन सक्छ ११ ११ ११ वा २२ म त्यहाँ २२ प्राप्त गर्दछु र क्यान्सरको लागि9हुन्छ, त्यसैले यो २ 29 २ 11 ११ पनि हुन सक्छ तपाईसँग मास्टर नम्बरहरू क्यान्सर हुन्छ ठीक छ, त्यसैले यो बुझिन्छ। ठीकै २१ क्यान्सरका लागि पनि ठीक छ, लियोलो इक्कीस एक तीनतीन एकतीस जना फोरफाइभ हुन सक्छ चारचालीस पैदल हुन सक्छ यो नौ or or वा 94 O ओके हुन सक्छ, अर्को म अर्को पात्र हुँ यो अर्को चरित्र हो यो GoOkay, हुन सक्छ एक एक ११ वा दुई जुम्ल्याहा १ 15 वा O१ एक बाट २१ वा बाह्र GoVirgin Libra96Can969 and7and र १ O OkayWaage १ 91 9199 त्यसोभए तपाईं यहाँ नौ जना छ? सात भने जोन 69 says भन्छन। ओह, यो एक नौ हो।
हो, छ सात सत्तरी-सात, साथै १,, म सोह्र वा 61१ पनि हुनेछु, ठीक स्कॉर्पियो, ठीक छ - वा एघार, छ, 66 66, २ 62 62२, एक शून्य छ कि १० हुन सक्छ। ठीक छ, र अर्को एक त्यसोभए एउटा ११ हुन सक्छ, वा एक सत्रह सत्रह 71१ र तीन हो। ठीक छत्तीस 6363-622673 37 तीस सायद एक श्रृंखला पनि।
ठिकै छ, हामीसँग के त्यस्तो चिन्ह छ जुन यो गम्भीर संकेत भन्दा पहिले यो यो भन्छ कि यो वृश्चिक धनु थियो धेरै स्ट्याक्सहरू थाहा छ र अन्तिम मीनको लागि साफल चाहिन्छ। ठीक छ, यस्तो धनु-मकर, मकर, यो कुम्भ हो। ठीक छ, तीन आठ सात पंद्रह तीन आठ सात पन्ध्र तसर्थ तीस तीस सात पंद्रह -8383--78 मकर मसँग मकर पाँचको लागि अरू के छ? तपाईंसँग पनि आफ्नो शैतानहरू पाँच, तीन निश्चित 555533 र मकर राशिको लागि पैंतीस कार्ड छ, पनि, ठीक छ, कुंभ।
मलाई माछाको लागि फेरबदल गर्नुपर्नेछ। हुनसक्छ मैले पर्याप्त अन्य डेकहरू लिएको छैन। ठीक छ, एक कुम्भ 44 4441१ १ ११२२।, त्यसैले also 44 पनि 8 र nine eight छ।
अठ्ठ्यासी र दस सत्रह र एक दस anda2010 दस र बीस ओके, कि एक राम्रो एक्वेरियस ओके हो, त्यसैले म मीन मीन पछि मिक्स गर्नेछु राम्रो पाउँदछ। ठिक छ? भाग्य अन्तिम माछा भाग्य भाग्य भाग्य भाग्य हेर्नुहोस् किनकि तपाईं तिनीहरूलाई एक राम्रो चयन माछा पाउन सक्नुहुनेछ Okay माछा 1:5त्यसोभए त्यो १ or वा 51१ हो - त्यो पनि सात हुन सक्छ र एउटा तीन वा एक वा तीन हो? चार सँग चालीस one० देखि चालीस forty forty forty or or 8 वा 8 र १ मीनको लागि २ वा १११18 को लागि केहि राम्रा स .्ख्याहरू छन्। त्यसैले म आशा गर्दछु कि तपाईंले यो सत्र रमाईलो गर्नुभयो, शुभकामना।
भाग्य जारी छ। यो तपाईको नम्बरहरूमा समायोजन गर्नका लागि खुशीको समय हो। म तपाईं सबै अब ciao सबै भन्दा राम्रो इच्छा
कुन वर्ष कुंभ राशिको लागि भाग्यशाली छ?
कुनैको लागिकुम्भजन्म, हल्का निलो र बैजनी प्रमाणित हुनेछभाग्यमानीसबै मार्फतबर्ष२०२१। शनि तपाईको शासक ग्रह हो। त्यसकारण सेतो र अन्य चहकिलो रंगहरूले पनि तपाईंको लागि राम्रो संभावनाहरू ल्याउन सक्छ। होईनकुम्भजन्मले गाढा निलो र हरियो जस्तो र colors्गबाट ​​धेरै फाइदा लिन सक्छ।२। २०२०।
भाग्यवस, हामीमध्ये केही ठूला र अझ राम्रा चीजहरूको लागि लक्ष्य गरीरहेका छौ जुन तपाईं जन्मेको दिन देखि स्टारहरू हुन। तपाईंको राशि चिन्हले बताउँछ कि तपाईं आफ्नो जीवनमा कती समृद्ध हुनुहुनेछ।
आजको लेखमा हामी तपाइँलाई तपाइँको अवसरहरू तपाइँको राशि चिन्हको आधारमा धनी हुनको लागि के हो भनेर बताउँछौं। त्यसो भए तपाईको चिन्ह के हो भन्ने कुराको मतलब छैन, तपाई कति धनी हुनुहुनेछ भनेर जान्न अन्तमा हेर्नुहोस्। मेष: मेष राशिफलका उद्यमी हुन् जसले फेरि लडाईमा हिम्मत गरेर यसलाई धनी बनाउन सक्दछन्।
मेषहरू उत्तम हुन्छन् जब तिनीहरू कुनै चीजको नेता हुन सक्छन्, त्यसैले प्रतियोगिता, प्रतियोगिता, र च्याम्पियनशिप उनीहरूलाई आकर्षक लाग्दछ। तर मेषको स्वाभाविक आवेगपूर्ण र अधीर प्रकृतिले तपाईंलाई बचत, दीर्घकालीन लगानी र कुनै पनि चीजसँग संघर्ष गर्न छोड्न सक्छ जुन अझ सांसारिक हुन्छ। तपाईंसँग प्राकृतिक शिकारी मानसिकता पनि हुन्छ, जुन तपाईंलाई असाधारण पैसा बनाउँदछ, जसले तपाईंलाई मोलतोल र मोलतोल खोज्दा राम्रो बनाउँछ।
त्यहाँ एक नकारात्मक पक्ष छ, तथापि। तपाईंको मितव्ययी प्रयासहरू आर्थिक हानिकारक हुन सक्दछ यदि उनीहरूले तपाईंलाई कथित बचतको लागि ज्यादै बढी खर्च गरेमा। वृषभ: वृषभ योग्यताको लागि सम्पत्ति आर्जन गर्न विलासी र असाधारणको लागि पेन्चन्ट मास्टर हो, तपाई आफ्नो शैम्पेन स्वाद कोषको लागि कडा मेहनतको लागि तयार हुनुहुन्छ।
लगानीको लागि गहिरो आँखा र वृषभको जोखिम विपरीत प्रकृतिले उनलाई युवा अवस्थादेखि नै करोडपति हुने बाटोमा खडा गर्‍यो। वृषभ अर्को ढोकामा करोडपति हुन सक्छन् यदि उसले काम गर्दछ भने - ती चीजहरूमा खर्च गर्नुको सट्टा पैसा कमाउन काम गर्छन्। लक्जरी सामान बेच्ने उद्देश्य बिना, वृषभ सम्भावित लाखौं डलरको उत्तराधिकारीलाई छोड्ने छन् जसले तरलताको अवधारणा बुझ्दछन् र तपाईंको प्यारो सम्पत्तीमा कुनै सम्बन्ध छैन, त्यहाँ आउनका लागि अझ धेरै राम्रा चीजहरू छन्, तर तपाईं अगाडि जानु भन्दा पहिले डान अरू ठूला व्यक्तिहरूका लागि हाम्रो च्यानल जाँच गर्न नबिर्सनुहोस्, यस्तै लेखहरूमा सदस्यता लिनुहोस् र घण्टी आइकनमा थिच्नुहोस् ताकि तपाईं कुनै पनि अद्यावधिकहरू नबिर्सनुहोस्! मिथुन: जबकि पैसा कमाउनको लागि रुचि छैन, सोशल मिडियाले प्रभुत्व जमाएको संसारमा, तपाईं आफ्नो तत्त्वमा हुनुहुन्छ जहाँ प्रभावकारीहरू स्पष्ट क्यारियर छनौट हुन्।
यस प्रकारको कामले तपाईंलाई एकै पटकमा धेरै चासोहरूमा लिप्त हुन अनुमति दिन्छ। तपाईं एक को लागी एक फेला पार्नुहुनेछ र यो कब्जा सम्म यो बोरियतले तपाईंलाई केहि रमाईलो केहि खोजको लागि पठाउँदैन। तपाईं गल्तीले धनी हुनुको सट्टा आर्थिक सफलतामा ठक्कर खान सक्नुहुन्छ किनभने तपाईं पैसा भन्दा तथ्या facts्क र जानकारी जम्मा गर्ने बारे बढी ध्यान दिनुहुन्छ।
क्यान्सर: क्यान्सर एक प्राकृतिक व्यापारी हो। उहाँ मानिसहरूलाई चाहिने कुरा र चाहना दिनमा सिपालु हुनुहुन्छ। तर धनी हुनु भनेको केकडाको लागि सँधै मामूली कुरा हुनेछ, जसको मुख्य चाहना त्यस्तो चीज बनाउनु हो जुन उनीहरूको जनताको हेरचाह गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईको सफल हुनुको विचारको धनी हुनेसँग कुनै सरोकार छैन, जुन सम्भवतः राम्रो कुरा हो किनकि तपाईले धनी हुनको लागि वास्तवमै के भनेर तयार हुनुहुन्न। ठुलो बढ्नको लागि, तपाइँ प्राय जसो तपाइँको आराम क्षेत्रबाट बाहिर जानु पर्छ किनभने यो तपाइँको लागि ठूलो नम्बर हो। तिनीहरूसँग स्थायी, स्थिर चीजहरू जस्तै रियल ईस्टेट र सेवानिवृत्ति कोषहरूको लागि पैसा प्रदान गर्न प्राकृतिक प्रवृत्ति हुन्छ।
वास्तवमा, क्यान्सर धेरै सम्भवतः एक दिन 40०१,००० करोडपति हुन सक्छ। लियो: लियोका लाखौं मानिसहरू प्राय: प्रसिद्धि र ब्रान्ड वफादारीको साथ आउँदछन्। तर जबकि लियो चमक र सुनमा आकर्षित हुन्छ, तपाईं सम्पत्ति स wealth्कलन गर्न संघर्ष गर्न सक्नुहुनेछ।
प्रतिभा र करिश्मा सफल हुनको बावजुद, लियोले आफ्नो सम्पत्ति उसले प्राप्त गर्ने ध्यानमा पाउन सक्दछन् र उनको प्रशंसकहरू र प्रशंसकहरूप्रति वफादारी व्यक्त गर्ने क्षमता, सेल्फीजको विश्वमा, ध्यान खोज्ने कलाको रूपमा सिर्जना गर्नमा छ धन। प्रभावकारी र आत्म-पदोन्नति कहिल्यै बढी आकर्षक भएको छैन, र यो लियोको लागि पाठ्यक्रम हो। कन्या: एक कन्याको रूपमा, तपाइँसँग पक्कै पनि, करोडपति बन्ने प्रवृत्ति हुन सक्दैन, तर यसको मतलब तपाई धनी हुन सक्नुहुन्न।
तिनीहरू प्रायः सेवामा निपुण हुन्छन् र प्राय: समयका कामहरू हुने शौकमा खुशी पाउँछन्। सांसारिक सफलताको आवश्यक पर्दैन र दिमागको रूपमा कार्य गर्ने क्रममा शल्यक्रियाको अनुहार भएका कसैसँग काम गरेर करोडपति बन्ने सम्भावना कम हुन्छ। के कन्या सधैंभरि जम्मा हुन्छ अधिक सम्भावना हुन्छ।
जब तपाईं धेरै पैसा बटुल्न प्रेरित गर्नुहुन्छ, लाखौं पनि, यो आफैं धनी हुने बारे कम नै हुन्छ। उनीहरू अधिक पैसा प्रयोग गर्न को लागी सम्भव छ संसारलाई राम्रो ठाउँ बनाउन। तुला राशि: विलासी-मायालु तुला राशिले उनीहरूलाई जति छिटो पैसा खर्च गर्दछ, जसको अर्थ तिनीहरू सम्भवतः उनीहरूको आफ्नै सम्झौताका सच्चा करोडपति बन्न सक्दैनन्।
तुला राशि अत्यधिक उदार पनि हुन्छ, जुन सबैले मनपराउने इच्छाको परिणामबाट हुन्छ। तपाईं प्रायः अवसरहरूबाट टाढा हुनुहुनेछ जसले केही जोखिम समावेश गर्दछ र तपाईंको सहज ज्ञानलाई विश्वास गर्छ किनभने तपाईं डराउनुहुन्छ कि कसैलाई निराश पार्नुहुनेछ र कहिल्यै धनी हुनुहुनेछैन। र सहयोगको लागि सोध्नु वा सुझाव खोज्नुको सट्टा तपाई स्वचालित रूपमा विश्वास गर्नुहुन्छ कि कसैले पनि तपाईलाई सहि दिशामा देखाउन सक्दैन।
ती आत्म-अवहेलना गर्ने विचारहरू विषाक्त, लिब्रा हुन सक्छ, तर तपाईंले फेरि प्रयास गर्नु अघि तपाईंले यसलाई आफ्नो टाउकोबाट बाहिर निकाल्नु पर्छ। धनी हुनु सजिलो छैन, तर सबै तपाईं नकारात्मक विचार छ भने यो कहिल्यै काम गर्दैन। वृश्चिक: लगानीको मास्टर, वृश्चिकलाई एक गणना जोखिम लिन कसरी थाहा छ र पुस्तक जस्तै सबैभन्दा टाढाका व्यक्तिहरूलाई पनि पढ्छ।
तपाईंको वास्तविक जोश शक्ति हो, पैसाको आवश्यक छैन, तर तपाईं निश्चित रूपमा पैसा किन्न सक्ने शक्तिको कदर गर्नुहुन्छ। वृश्चिक हो, अन्य कुनै राशि चिन्हहरूको तुलनामा करोडपति बन्न बढी सम्भावना हुन्छ, यदि उनीहरू साँच्चिकै चाहन्छन् र वृश्चिकले वास्तवमै केहि चाहान्छ भने तिनीहरू मर्नु अघि मर्दछन्। वृश्चिकले बुझ्दछ कि केवल एक पेचेक स collecting्कलन गर्दैन, तर पैसा कमाउने तपाइँको लागि।
लगानीहरू, विशेष गरी loansण र वित्तीय उपकरणहरू आकर्षक लुकाइएका र फोहोर व्यापारहरू जस्तै फोहोर निपटान र अपराध दृश्य सफायामा सम्पत्ति पाउन आकर्षक छन्। धनु: धनु वृद्धावस्थामा वा वृद्ध व्यक्तिको मार्गनिर्देशनमार्फत आफ्नो भाग्य बनाउने सम्भावना बढी हुन्छ किनकि उनीहरू युवालाई खोज र अनुभवको रूपमा देख्छन्। भाग्यशाली चिन्हको रूपमा परिचित, तपाईं सरासर भाग्य बाहिर वा सही क्षण मा एक प्रवृत्ति पकड्न सक्नुहुन्छ।
धनु राशि को रूप मा, तपाई जहिले तपाईलाई चाहानुहुन्छ र तपाईले सँधै नयाँ चीजहरु खोज्नु हुन्छ। रिच द्रुत योजनाहरू सामान्य कामबाट बच्न। तपाईं स्वप्नदर्शी हुनुहुन्छ जसले चिसो हुनु अघि उनीहरूको प्रवृत्ति देख्दछन् र तिनीहरूमा नरक ल्याउनुहुन्छ।
तपाईंको उत्साहबाट फाइदाको लागि तपाईं यससँग लामो समयसम्म रहिरहनुभयो कि फरक कुरा हो, तर प्राकृतिक भाग्यले तपाईंलाई अन्तमा बचत गर्दछ। मकर: मकर एक करोडपति बन्ने दोस्रो सम्भावित संकेत हो र यदि विश्व उपलब्धि समाज भएको भए यो पहिलो हुने थियो। आर्थिक रूपमा संघर्ष गरिरहेका जन्मजात सीईओ एक निर्धारित मकर राशिको लागि विकल्प हुँदैनन् जुन लगानी गरेर बुद्धिमानी आर्थिक निर्णयहरू गरेर साम्राज्य निर्माण गर्न उपयुक्त हुन्छ।
यसले ठूलो भिन्नता बनाउन धेरै बर्ष लिन सक्दछ, तर तपाईले आफूले चाहानुहुन्छ पाउनुहुनेछ र कसैको अनुहारमा यसलाई लानुहुन्न। जे होस्, यसको मतलब लामो घण्टा एक्लो हुन सक्छ, गलतफहमी भएको छ, र सम्बन्ध PS मा काम छनौट गरेर। जब सम्म तपाईं असफलताको डरले पक्षाघात हुनुहुनेछ, तपाईले लाखौं मानिसहरूलाई सँधै जोगाउनुहुनेछ तर सुरक्षा मात्र होइन तपाईको परिवारका लागि पैतृक पनि बनाउनु हुनेछ।
प्रदान गरिएको छ, तपाईंको बच्चाहरूले उनीहरूको आफ्नै पैसा बनाउनु पर्छ किनकि तपाईं बृद्धि र सफल हुनुभएमा तपाईं आफ्नो भाग्यहरूको ठूलो स्मारकहरू बनाउनमा खर्च गर्नुहुनेछ। कुम्भ: आधुनिक प्रविधिले अन्यथा गैर भौतिकवादी कुम्भ करोड़पतिमा परिणत गरेको छ। ती राशि चिन्हहरूका बीचका आविष्कारक, कुम्भ, संयोगले धनी हुनेछन्, त्यसपछि सबै कुरा दिनुहोस् वा कम्युन किन्नुहोस् ताकि उनीहरूका साथीहरू जातीय जातिबाट टाढा शान्ति र सौहार्दमा बस्न सक्नेछन्।
यस्तो लाग्न सक्छ कि तपाईलाई सांसारिक नाफामा कुनै चासो छैन यदि तपाई पैसा बाट आउनु भयो भने पनि। विडंबना यो हो कि गैर सांसारिक चीजहरूमा पूर्ण कुल भक्तिले तपाईंलाई सीप र क्षमताहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ जसले मानिसलाई ठूलो पैसा तिर्दछ। तपाईं पैसा स्वीकार गर्नुहुन्छ जबसम्म तपाईंसँग एक लेखाकार छ जो वास्तवमा वित्तीय मामिलाहरूसँग व्यवहार गर्दछ र तपाईंसँग आविष्कारशील र स्तब्ध पार्ने स्वतन्त्रता हुन्छ।
मीन: तपाईं निश्चित रूपमा राशि चिन्ह हुनुहुन्छ जुन भौतिक संसार, प्रतिस्पर्धा र व्यापारको बारेमा कम ध्यान राख्छ। तर तपाईं पनि कालो घोडा हो जसले चुपचाप धन सम्पत्तिहरू बनाउनुहुन्छ जो तपाईं हुनु पर्ने अरूले तपाईंलाई पैसा दिनको लागि हुनु पर्छ। मोडलिंग, अभिनय, र मनोरन्जन मीन रिच टिकटहरू हुन सक्छन् - एक साबुन ओपेरा अभिनेता देखि पप स्टार को लागी केहि पनि।
तपाईं धन मा रुचि नहुन सक्नुहुन्छ, तर धन वास्तवमा तपाईं र तपाईंको जीवनको कठोर वास्तविकताहरू बीच चाहने बफर सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। माछा खतरा भनेको ती व्यक्तिहरुलाई विश्वास गर्नु हो जसले आफ्नो पैसा आफैं लिन चाहान्छन् व्यस्त रहँदा व्यस्त छ वास्तविक संसारबाट लुकिरहेको दृश्यमा र बजेट र ब्यालेन्स पानाहरू जस्ता चीजबाट टाढा रहन। के तपाइँ राशि चिन्हहरूमा विश्वास गर्नुहुन्छ के तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँको राशि चिन्हको कारण तपाईं धनी र सफल हुन सक्नुहुन्छ? हामीलाई तल टिप्पणी अनुभागमा थाहा दिनुहोस्!
के २०२१ कुम्भको लागि राम्रो वर्ष हो?
नयाँ संगबर्षराशिफलको नयाँ फसल आउँछकुम्भसबै को भाग्यशाली हुन तैयार छ। मा२०२१, एमबीजीका निवासी ज्योतिषविद् एस्ट्रोटविन्सले भविष्यवाणी गरेका थिए कि सबैको आँखा पानी बियरमा हुनेछ, धेरै हदसम्म धन्यवादउत्तमसंयोजन जुन कि डिसेम्बर २१, २०२० मा आकाश (र न्यूजफिल्ड) जलायो।चार २०२१
कुंभ मनपर्ने रंग के हो?
यदि तपाईं कुम्भ हुनुहुन्छ भने, तपाईंको मनपर्ने रंग होनिलो!२। २०१।
कुम्भ कमजोरीहरू के हुन्?
कमजोरीहरू: अत्यधिक भावनात्मक अवस्था,सम्झौता गर्न असमर्थता, तातो स्वभाव, अलग। कुम्भ मनपर्‍यो: मनोरन्जन, अरूलाई सहयोग पुर्‍याउने, कारणको लागि संघर्ष, बौद्धिक कुराकानीहरू, एक उत्तम श्रोता। कुम्भ मन नपर्ने: प्रतिबन्धहरू, अपूर्ण प्रतिज्ञाहरू, एकान्तता, बोरिंग अवसरहरू, पहिचान जुन अन्य विचारहरू छन्।
आज कुम्भ भाग्यशाली नम्बर कुन हो?
कुम्भ लकी नम्बरहरू सामेल छन्२,,, & र। अन्य नम्बरहरू पनि संख्याहरू हुन सक्छन् जुन यसमा थप्न उदाहरणको लागि, भाग्यशाली संख्या be 63 हुन सक्छ, किनकि यसले to सम्म थप गर्दछ।
के कुम्भ २०२० मा भाग्यशाली छ?
कुम्भकुंडली२०२०भविष्यवाणी गर्दछ कि यस वर्ष धेरै नयाँ अवसरहरू आउँनेछन्! छ२०२०को लागी एक राम्रो वर्षकुम्भ?२०२०आफूलाई र तपाईंको वरपरको सुधार गर्ने प्रयास गर्न एक उत्तम वर्ष हो। यस वर्ष तपाईलाई बढी आवेग लाग्ने सम्भावना छ, जुन तपाईको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउँदछ।
कुम्भ व्यक्तिहरूले बर्षमा उनीहरूको व्यक्तित्व पत्ता लगाउँदछन्२०२23, जसले तिनीहरूलाई जीवनसँग व्यवहार गर्न बढी आत्मविश्वास दिन्छ। वित्तीय स्थिति आमूल सुधार हुनेछ। बचत र लगानीको लागि तपाईंसँग अधिक पैसा हुनेछ।
आउने ज्योतिषलाई हेर्दा,२०२०हुनेछसबैभन्दा खराब वर्षयी तीन राशि चिन्हहरूको लागि: मिथुन, तुला, रकुम्भ। शुरुवातकर्ताहरूको लागि, त्यहाँ छवटा ग्रहणहरू हुनेछन्२०२०, चार विपरित तपाईले वार्षिक रूपमा वार्षिक रूपमा अनुभव गर्नुहुनेछ, जुन अराजकताको कारण बन्नेछ।१ २०१।
डिसेम्बरमा कुम्भको लागि राम्रा दिनहरू के-के हुन्?
अधिक राम्रो दिन राशिफल क्यालेन्डर (विभिन्न संकेतहरूका लागि): कुंभ राशिको लागि निम्न पात्रोले प्रेम, अवसर, क्यारियर, पैसा, र डिसेम्बर महिनाको व्यक्तित्वको लागि सबै भन्दा राम्रो दिनहरू देखाउँदछ। सम्भावित चुनौति वा आँधीबेहरी मौसम, त्यसैले कुरा गर्न को लागी, पनि संकेत गरीन्छ। यदि किंवदन्ती माथिको छैन भने, तपाईं यहाँ पाउनुहुनेछ: किंवदंती
डिसेम्बर २०२० को लागि कुम्भ राशिफल भनेको के हो?
तपाईंको हस्ताक्षरको २०२० कुंडली भविष्यवाणीहरू तपाईंको लागि भण्डारमा के छ वा कुम्भ व्यक्तित्व प्रोफाइल जाँच गर्नुहोस्। डिसेम्बर, कुम्भमा स्वागत छ! नोभेम्बर को अन्त्य सम्भवतः धेरै आवश्यक पर्ने शुभ समाचार ल्यायो र तपाईंलाई स्वयं-हेरचाहमा संलग्न हुन प्रोत्साहित गर्‍यो।
एक्वेरियस एसेन्डन्टका लागि सबै भन्दा राम्रो क्यालेन्डर कुन हो?
निम्नलिखित क्यालेन्डरहरूले दिनहरू देखाउँदछ जब चंद्र, सूर्य, र भित्री ग्रहहरूले कुंभ राशिको चिन्ह अन्तर्गत जन्मेका र एक्भेरियस चढ्ने व्यक्तिहरूका लागि केहि गतिविधिहरूलाई समर्थन गर्दछन्। पात्रोले अवसर अवधिहरू, साथै दिनहरू देखाउँदछ जब अतिरिक्त सावधानी क्रममा छ। नोट गर्नुहोस् कि यी क्यालेन्डरहरू तपाईंको आरोहको चिन्हको साथ उत्तम प्रयोग गरिन्छ।